5 Best Hot Springs Dabiiciga In Europe | Save A tareenka
Home > Tareen Safar Talyaani > 5 Best Hot Springs Dabiiciga In Europe
5 Best Hot Springs Dabiiciga In Europe
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani
Oceans, webiyaasha, iyo harooyinka ma aha kuwa yaabab dabiiciga ah oo kaliya qurux badan in ay yihiin qorshaynta qiimihiisu ku dhawaad ​​maalin fasax ah. Waxaan magaca Ilaaheenna 5 Best Hot Springs Dabiiciga In Europe in ka badan waa booqashada ah oo ku kacaya iyadoo la kaashanayo tigidhada tareenka Save A tareenka.
5 Best Hot Springs In Europe 1: Aix Les Bains Riviera Of The Alps, France
Aix Les Bains, Riviera ee buuraha Alps waa magaalo kulul, dajinaya on the cajiib qalaad oo ballaadhan Lake Bourget. Tani waa mid ka mid ah 5 Best Hot Springs Dabiiciga In Europe iyo waa helay qoto dheer ee degaanka Savoie Faransiiska, caan ku tahay xaafadda Massif Alps. Joogitaanka oo biyo saafi ah, la wanaagga badan oo macdanta, oo dhan ku wareegsan magaalada, waxaa si dabiici ah u horseedi xeerkii this kaamerada. Meeshani runtii sixir ku siinayaa ugu fiican ee dabiiciga ah ee aad qof si fiican u. In Aix les Bains Alps Riviera, daawada dabiiciga ah iyo baaruud biyo hodan isu geeyo si ay u bixiyaan dhalashadii run ah.
Geneva in Aix Les Bains Le Revard tareenka
Lausanne in Aix Les Bains Le Revard tareenka
Paris si Aix Les Bains Le Revard tareenka
Bern si Aix Les Bains Le Revard tareenka
2: Terme di Saturnia - Tuscany, Italy
Easy in ay halkaas ka kaliya ku saabsan meel kasta oo aad u hesho in Europe iyadoo la kaashanayo Save A tareenka, Tuscany faanaa mid ka mid ah ilaha biyaha oo kulul idyllic adduunka ugu. Sidaas, waxaa halkaas layaabna ma leh waa liiska of our 5 Best Hot Springs In Europe! Iyadoo 500 litir oo biyo ah daweyn la nuugaa ama looga saaraa bohol a Kobenhagen kasta labaad, biyaha guga oo gebi ahaanba saafi ah. Thanks to ah 99.5 fashay biyo F dhulka iyo bay'edda ku qurux Talyaani waxa ku xeeran, shaki kuma jiro kugu lagdaan doonaa dawlad qoto dheer oo nasasho guga.
Tani HBS kaamerada sheegta in ay lahayn meel loo siman yahay ee dunida. biyo isufaan la dabiici ah awood, oo saafi ah, hodan ku cusbada macdanta. Hadiyad A ee dabiiciga ah taas oo qabanaysa ee barkadaha Spa sidii wuxuu la barwaaqaysan ka dib shukaansi guga kun oo sano ah. Waa maxay sababta aan u tijaabiso naftaada?
Florence si Tareenadu Grosseto
Perugia in Tareenadu Grosseto
Viterbo in Tareenadu Grosseto
Rome si ay Tareenadu Grosseto
5 Best Hot Springs In Europe 3: Aqua wadini - Tyrol, Austria
Tan iyo qarnigii 16aad, qof ayaa ku booqanaya Tyrol in ay ka faa'iideystaan ​​guryaha bogsiinaya of ilo ay u kulul. Hadda waxaad ku raaxaysan kartaa bad weyn iyo balliyo kaamerada ka buuxsada 90 darajo oo F ah in 97 fashay F biyaha diiri kaamerada. Maxaa ka dhigay guga gaar ah waa fijaan biyo kaamerada levitating ay, buuxsamay nalalka, kuraasta massage, iyo whirlpools.
Isha qaadaan naqshadaha oo ka mid ah asal ahaan hall HBS waxay muraayad quruxda dabiiciga ah ee ku hareeraysan ah. Wood, dhagax, iftiinka iyo – Dabcan – biyaha waa qayb ka mid ah muuqaal cajiib ah ka. Wadar ah 12 barkadaha gudaha iyo dibadda idiin ku yeedhi inuu dabaasho oo ha naftaada fakadaan. The barkadaha indoor ku xiran yihiin saddex ka dibadda duwanyihiin barkadaha on stilts marayo biyaha.
Zurich si Tareenadu Innsbruck
Salzburg in Tareenadu Innsbruck
Vienna si ay Tareenadu Innsbruck
Cologne si Tareenadu Innsbruck
4: Thermae Bath Spa - Bath, England
Hot Springs In Europe in ay yihiin nasto iyo taariikhi? Waxay u muuqataa sidii hab wanaagsan oo sax qaar ka mid ah liiska baaldi Alaabta ka mid ah go. In wadnaha ee magaalada Bath, waxaad ka heli doontaa Bath Thermae ku Spa. Abaalmarinta An ku guuleystay HBS dabiiciga ah meesha aad hadda ku maydhaa kartaa in Britain si dabiici ah oo kaliya diiran, biyaha hodan macdanta. Just sida Celts iyo Romans sameeyey in ka badan 2,000 sanado kahor. Waxaa, si kastaba ha ahaatee, sii in ay tahay hoyga in Britain oo kaliya biyaha kaamerada dabiiciga ah. Hel waayo-aragnimo nasashada kama dambaysta ah. Booqo abaalmarintan halkay maalin guuleystay macdanta biyaha hodan kulaalay 92 darajo oo F ah iyo daaweynta HBS si taxadar leh loo qorsheeyay.
5 Best Hot Springs In Europe 5: Gellert Qubeyska, Hungary
Waxaan aad u badbaadiseen ugu fiican ee ugu danbeysay ee buugaagta our. Haddii aad rabto in aad dareento sida boqortooyada, xataa dhawr saacadood, hubaal waa in aad soo booqato Gellert Qubeyska ee Hungary magaalada, Budapest. In ay qaab-dhismeedka galeen waxaad ka heli doontaa khadadka ballaaran oo bad diiran oo tiirarkana Roomaanka. Biyuhu waxay ka kooban yihiin qaybo kala duwan oo waxtar u leh bogsashada arthritis iyo dhibaatooyinka kale ee orthopedic. Gellert Bath furay 1918 bixiya daaweynta biyaha, daawooyinka la isticmaalayo ilihii moolka dheer isla dhulka hoostiisa ah Knights of St John isticmaalo qarnigii 12aad, iyo ka dib on Turkigu si ay u dareemaan awoodaha bi'adda ee macdanta biyaha hodan.
Ready in ay la kulmaan nasashada ee ay ugu gaar ah? Markaasuu madaxa ka badan si ay u Save A tareenka oo jartaan tikidhka tareenka in mid ka mid ah qaado oo ka mid ah our 5 ilo Best kulul ee Europe.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Best Hot Springs Dabiiciga In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hot-springs-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / in ay / TR ama / luqadaha de iyo ka badan.
Safrida Si Strasbourg By tareenka